Ninkii Daacish qoor-goynta u qaabilsanaa oo la dilay – AwKutub News
Ninkii Daacish qoor-goynta u qaabilsanaa oo la dilay
Leave a Comment on Ninkii Daacish qoor-goynta u qaabilsanaa oo la dilay
Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn lagu dilay Abu al-Umarayn, oo ka tirsan kooxda IS islamarkana sida la sheegay dilay dhowr qof oo u dhashay dalalka reer galbeedka ee u shaqaynayay hay’adaha gargaarka.
Ninkani ayaa sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka waxaa lagu dilay duqayn laga fuliyay gudaha dalka Suuriya.
Ciidamada isbahaysiga ayaa waxay fuliyeen “weerar la xaqiijiyay ” axaddii kaasi oo lala bartilmaameedsaday hogaamiyayaasha IS ee uu ka midka yahay Umarayn ee ku sugan koonfur bari Suuriya axaddii,waxaa sidaasi sheegay militariga Mareykanka.
Ninkan ayaa la rumaysan yahay in uu masuul ka ahaa dilkii Cabdul-Raxman Kassig oo ahaa nin Mareykanka u dhashay oo hay’ad gargaar u shaqaynayay islamarkana qoorta laga gooyay November 2014.
Waaxda gaashaandhiga Mareykanka ayaa sheegtay in Umarayn “uu halis ku ahaa xoogaga isbahaysiga”.
Kooxda la baxday dowladda islamka ayaa waxaa gacantooda ka baxay ku dhawaad dhammaan dhulka ay horey u maamuli jireen ee Ciraaq iyo Suuriya.
Dad gaaraya 10 milyan ayaa ku nool goobaha ay IS horey gacanta ugu hayn jireen.
Tags: Caalamka Carabta Daacish Dil nin Wararka
Previous Entry Wiil 7 jir ah oo $22 milyan ka sameeya Youtube-ka
Next Entry Mareykanka oo safaaraddiisii Soomaaliya dib u furay